9:20 PM | Posted by Unknown
သြဂုတ် ၁၃၊ ၂၀၁၁
၂၀၁၁ နွေရာသီတွင်သို့ ရောက်လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်တွင်းစစ်မီးသည် အရှိန်တိုး၍ ပြန်လည်တောက်လောင်ခဲ့ပေသည်။ ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ပိုမိုများပြား ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ အသက်များစွာ အသက်များစွာ သေဆုံးရကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထိုဆုံးရှုံးမှုများကို ဆက်၍မခံကြရစေရန် အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုများကို အမြန်ဆုံး ရပ်စဲကြဖို့ မလုပ်မဖြစ် လိုအပ်နေပြီ။
၂။	တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ကြပါရန်
ငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှုများကို နိုးနိုးကြားကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ် လုပ်ကိုင်ကြပါရန် ပြည်သူအပေါင်းတို့အားလည်း လေးစားစွာ ပန်ကြားလိုက်ပါသည်။
(ကျည်ဆန်ခြုံ၍ မလုံ . . . မေတ္တာခြုံမှ လုံလိမ့်မည်။)
၇. ၈. ၂၀၁၁၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ရှမ်းရဋ္ဌ
8:43 PM | Posted by Unknown
8:41 PM | Posted by Unknown
ယနေ့ သောကြာနေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် နေပြည်တော် အစိုးရ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့ရသော ဦးကျော်ဆန်း။ (photo: Reuters)
ဧရာဝတီမြစ်တွင် အကြီးအကျယ် တည်ဆောက်နေသော အငြင်းပွားဖွယ် စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းစဉ် ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက ငိုချင်းချခဲ့သည်ဟု အင်တာနက် သတင်းများက ဆိုသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ ရေးသားချက်များမှာ facebook မှ ကူးယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
( ၁ ) ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အမေးအဖြေလုပ်တုံးမှာ ငိုချလိုက်တာ။ ပြီးတော့ ခဏနေမှ တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်၊ ကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှ အကောင်းမမြင်တဲ့စိတ်ကြောင့်​ Emotion မထိန်းနိုင်လို့ပါ။ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါကို မဖွကြပါနဲ့လို့ တောင်းပန်သတဲ့။ ဂျာနယ်လစ်များ ကလည်း လိုက်နာရှာပါတယ်။ ဟီးဟီး နှစ်နာရီလောက်ကြာတော့ အင်တာနက်ေ ပ်ါမှာ မောင့်မျက်ရည်ဝိုင်းဇာတ်ကား​တက်လာတော့တာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဧရာဝတီကတော့ ဒင်းတို့ အသဲနှလုံးကို ထိုးနှက်နေပြီ။
( ၂ )ကိုယ်တိုင် အကယ်ဒမီ တက်ယူတော့ မယ်ထင်ပါ့...။
( ၃ ) အိကနဲ အိကနဲ ဖြစ်နေတာများ... ဟီးဟီး.. ပီးတော့ သေသေချာချာမှာပါတယ်.. ဒီကိစ္စကို မဖွပါနဲ့တဲ့.. ကိုယ်တွေကလဲ မဖွပါဘူး...
( ၄ ) ဟီး မိုက်သကွာ........ အကယ်ဒမီရှော့ ...
( ၅ ) မောင့်မျက်ရည်ဝိုင်း၊ မောင်ငိုမယ်မိုးသဲထဲမှာ ဟဲဟဲ ဧရာဝတီရေမရှိတော့ ဘူးဆိုလို့ မောင့်မျက်ရည်နဲ့ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်
( ၆ ) ဟ ရောင်းရင်းတို့ကလဲကွာ၊ဒီဗီဘီက ဦးနေဇော်နိုင်အတိုင်းပဲပါလားဗျာ...ုဦးနေဇော်နိုင်လုပ်လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မလုပ်တာကြာပြီ....ဘာတဲ့ ကျွန်တော်တုိ့က စိတ်ရှည် သီးခံနေ ပါ တယ် ဆိုတဲ့စကားကို ၀န်ကြီးခင်ဗျားပဲပြောတော့ဗျာလို့ ကျွန်တော်ဖွင့်ထားမိသော ဒကားများဆိုလားဂျာ...အဲဒါနောက်ပိုင်း သူတော်တော် သတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ေ​တာ့ဘူးဗျ
( ၇ ) သတင်းထောက်တွေက မချော့ကြဘူးလား။
တချိန်က ပျော်ပျော်ပါးပါး ၁ (photo: unknown source)
တချိန်က ပျော်ပျော်ပါးပါး ၂ (photo: unknown source)
facebook/Ohn Mar Oo ဓာတ်ပုံများ
ပဲခူးသား ပေးပို့လာသည့် ပုံများ
AP သတင်းဌာန ဓာတ်ပုံများ၊ ကြာသပတေးနေ့